लाखौं विन । इन्टरनेटमा Play - BuyLotteryTicket.info
लोट्टो - लटरी , ताकि तपाईं करोडपति बन्न सक्छ ! तपाईं एक विशाल योगफल जीत सक्ने केही विशाल लटरी , संसारमा छन् । जबकि युरोप रेकर्ड - कुटपिट SuperEnalotto र EuroMillions अमेरिका मा , लटरी , लोकप्रिय बिजुली बल र मेगा लाखौं हो । यी लटरी मा अब इंटरनेट मा सबै खेल्न सक्छन् ।
बिजुली बल एक अमेरिकी लटरी छ , त तपाईं एक करोडपति हुन सक्छ ! यो लटरी को अन्तर्राष्ट्रिय संघ ( MUSL ) द्वारा गरिन्छ । शक्ति बल लटरी नियमहरु धेरै नै सरल छ । तपाईं आकर्षित सबै संख्या हिट छ । तपाईं सबै को संख्या अप मारा एक प्रमुख jackpots Jackpot जीत । धेरै मानिसहरू सबै संख्या जानेछन् भने , मुख्य पुरस्कार सबै मानिसहरू द्वारा साझा गरिन्छ । $ 20 लाख - यति तपाईं बिजुली बल जीत न्यूनतम रकम ( खजाना ) छ । यो विजेता थिएन भने प्रत्येक रोल ओवर , , $ 5000000 अमेरिकी वृद्धि भएको छ। Winning 29 वर्ष को अवधि मा किस्तामा भुक्तानी छ । शक्ति बल मा खेल नियम : 1 देखि 26 को 1 देखि 695संख्या प्लस एक नम्बर छान्नुहोस् यस अतिरिक्त संख्या बिजुली बल हो । 26 को 1 देखि संख्या रातो बैसाखी मा हो गन्ती 1 69 , सेतो क्षेत्रहरूमा छन् । बिजुली बल लटरी बुधवार र शनिवार हो । स्थान बिजुली बल पश्चिम डेसमोइन्स , Iowa मा MUSL छ खिच्नुहुन्छ । बिजुली बल लटरी समय : 22:59 अमेरिकी पूर्वी समय , 21:59 मा केन्द्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका मा , जबकि । सबै भन्दा ठूलो संचय 18.02.2006 बिजुली बल थियो । $ 000 मिलियन , 8 खेलाडी बीचमा विभाजित थियो 365 000 को राशि ।
-> इन्टरनेटमा Play Next jackpot: $230,000,000
SuperEnaLotto लटरी मूल इटाली देखि , युरोप मा लोकप्रिय एक खेल हो । SuperEnaLotto मा जीत , संसारको सबैभन्दा ठूलो को एक विशाल गर्दै छन् । खेलाडी इंटरनेट SuperEnaLotto खेल्न सक्छन् किनभने यो पनि हो । पहिलो आकर्षण ठाउँमा SuperEnalotto3XII 1997 वर्ष लाग्यो । हरेक मङ्गलबार , बिहीबार र शनिबार - आकर्षण भाग्यशाली संख्या 20:20 स्थानीय समय मा3पटक एक हप्ता हो । विजय SuperEnaLotto विशाल हो । यी सबै भन्दा ठूलो 147,807,299.08 युरो छ । यो ठूलो राशि अगस्ट 22 , 2009 वर्ष विजयी भएको थियो । जस्तै धेरै 1,300,000 रूपमा युरो प्राथमिक खजाना पहिलो तह छ ! यस राशि को संचित जीत हो । हाल , संचयी SuperEnaLotto को राशि को रूप मा कुनै प्रतिबंध हो । आकर्षित समयमा SuperEnalotto 90 संख्या बाहिर6छ । एक छ मारा तपाईं 90 अनियमित संख्या बाहिर6संख्या हिट छ । यो 622614630 1 छ , किनभने यसमा6संख्या हिट गर्न धेरै संभावना छ ।5संख्या मार यस संभावना छ 1 1,235,346 गर्न ,4संख्या 1 11,907 गर्न , तीन संख्या SuperEnaLotto मार को संभावना 1 लागि 327 छ , जबकि छ SuperEnaLotto विजेता को सम्भावना एकदमै कम छ , तर धेरै ठूलो jackpots धन्यवाद । भाग्यशाली संख्या मा पर्ची इन्टरनेट मार्फत प्रत्यक्ष खरिद गर्न सकिन्छ । यो गर्न को लागि, शर्त SuperEnaLotto व्यवहार गर्नुहुन्छ जो वेबसाइट , आफ्नो खाते । एक पल्ट दर्ता , तपाईं 90 को बाहिर6संख्या चयन गर्न तपाईं तिनीहरूले प्रभाव प्रतिष्ठानहरु कसरी खिच्नुहुन्छ चयन र मिति चयन संख्या खिच्नुहुन्छ चयन गर्न सक्नुहुन्छ । इन्टरनेटमा निहित SuperEnaLotto मा बिरुवाहरु लागि , तपाईंले इन्टरनेटमा क्रेडिट कार्ड प्रत्यक्ष भुगतान गर्न सक्छन् ।
-> इन्टरनेटमा Play Next jackpot: €74,300,000
मेगा लाखौं अमेरिकी विजेता लागि न्यूनतम पुरस्कार जति लाख 12 US $ रूपमा ( 12 करोड डलर ) छ , जो मा , 2008 मा स्थापित भएको थियो एक लटरी छ .. मेगा लाखौं खेल मा नियम 75 को 1 देखि पाँच संख्या हिट छ र 1 देखि 15 को एक अतिरिक्त संख्या मारा 75 1 सफेद बल , 15 को 1 देखि संख्या हो गन्ती सुनको बलमा छ । 75 1 देखि संख्या आकर्षित एउटा मेगा बल भनिन्छ । सबै ती संख्या Hitting मेगा लाखौं मा खजाना जीत , र यस कम से कम 12 लाख डलर छ । मेगा लाखौं ( खजाना ) मा गृह विन प्रत्येक वर्ष , 26 वर्ष को लागि एक किस्त दिइन्छ । मेगा लाखौं लटरी अमेरिका मा 23:00 पूर्वी समय मा WSB - TV मा हरेक मंगलवार र हरेक शुक्रबार थपिनु । चित्र अटलान्टाका ठाँउ ले । ग्लेन बर्न्स द्वारा आयोजित छ । मेगा लाखौं मा सबै भन्दा ठूलो पुरस्कार 16.10.2009 पतन । यो $ 200 लाख डलर ( 200 करोड डलर (लगभग 137 मिलियन अमेरिकी डलर ) थियो । खजाना (5+1 ) जित्ने मौका 175.711.536 मा 1 छ ।5संख्या ( बलहरु सफेद ) मार को मौका 3.904.701 1 छ । Winning त $ 2,50,000 छ ।4सफेद बल र सुन (4+1 ) मार को मौका $ 10,000 जीत चार सफेद बल र सुन (4+1 ) मार , 1 d0 689,065 छ । चार सफेद बल (4+0 ) वा3सफेद बल र एक सुन (3+1 ) मारा व्यक्ति जीत $ 150 । 13.7813+1 1 छ मार जबकि4सफेद बल मार सम्भावनामा , 15.313 मा 1 हो । तीन सफेद बल (3+0 ) $7जीत , र यो मौका Hitting 1 लागि 36 छ 1 844 को - यति सेतो र सुन बल दुई बलहरु हिट मौका छ , त्यसपछि $ 10 जीत हामी एक सेतो र सुनको बल को हिट भने , तब तपाईं $3जीत , र यस्तो संयोजन मार को संभावना सम्म 141 हो मेगा लाखौं मा सानो पुरस्कार $2हो , तपाईं सुनको बल मार गरेर जित्न सक्छौं , र मात्र सुनको क्षेत्र मार को संभावना 1 लागि 75 छ
-> इन्टरनेटमा Play Next jackpot: $245,000,000
यूरो लाखौं लटरी युरोप मा सबै भन्दा लोकप्रिय छ । तपाईं यूरो लाखौं खेल्न सक्छन् जहाँ देश हो : अस्ट्रिया , बेल्जियम , स्पेन , फ्रान्स , आयरल्याण्ड , लक्जमबर्ग , पोर्चुगल , स्विट्जरल्याण्ड र संयुक्त राज्य । यूरो लाखौं लटरी FRANCAISE DES JEUX द्वारा Camelot द्वारा बेलायत मा , लटरी लटरी को Aquestas डेस अवधि द्वारा स्पेन मा आयोजित , र फ्रान्स मा भएको थियो । युरोपेली संघका देशहरू को संख्या मा अनुमानित वृद्धि माध्यम ले, यो तपाईं यूरो लाखौं खेल्न सक्छन् जो मा देशहरू वृद्धि गर्न सम्भव छ । पहिलो यूरो लाखौं लटरी खेल पेरिस मा 13.02.2004 मा सम्पन्न भएको थियो । यूरो लाखौं पेरिस मा 21:25 मा शुक्रबार आयोजित गर्दै छन् खेलमा संख्या रेखाचित्र । खेल को संख्या550 संख्या देखि आकर्षित भएका छन् भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन् । साथै ,91 देखि आकर्षित दुईवटा नम्बरहरू छन्9बलमा संग मिसिन Paquerette हो, जबकि Stresa , 50 बलमा हुन्छ कि एक मिसिन हो । संचय सबै ती संख्या हिट गर्न जीत गर्ने । सुरुमा , संचय 15 लाख सम्म छ । यूरो । यूरो लाखौं मा सर्वोच्च पुरस्कार 126 000 000 लाख सम्म छ । खेलाडी स्पेन मा मे 2009 मा यो विशाल योगफल जीत भएको छ । यूरो लाखौं मा मुख्य पुरस्कार विजेता यस संभावना छ यूरो लाखौं खेल्न कसरी ? यूरो को लाखौं इन्टरनेट मार्फत एक धेरै नै सरल ढंगमा खेलेको गर्न सकिन्छ । बस हामीलाई यूरो लाखौं , व्यवस्थापन जीत मा शर्त पठाउन गर्ने क्षमता दिन्छ जो त्यहि वेबसाइट , आफ्नो खाते । यूरो लाखौं मा कुनै पनि राशि विजेता को सम्भावना 1:24 छ , त्यसैले यो धेरै ठूलो छ । यूरो लाखौं मा मुख्य पुरस्कार विजेता को सम्भावना 1:76000000000 ( 76 करोड डलर मा 1 ) छ । सबै विजेता यूरो लाखौं करमुक्त हो ।
-> इन्टरनेटमा Play Next jackpot: €76,000,000